Posted: Bitootessa/March 24, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (2)
Ana dubbiin naaf hin galle fi dhiibboo natti ta’e tokko, Wayyaanotni akka humnaan dhufanii biyya sana qabatan himachaa; humnaan malee akka hin deemnes otuu hin dhokfatin ifaa ifatti beeksisaa otuu jiranuu; kana birallee dabranii, abbaan fedhe karaa fedheenuu yoo nudura dhaabbate sirrii isin galchina jechaa otuu dhaadachaa jiranuu; lammiilee keenya ajjeesanii karaarratti gatanii irbaata waraabessaa godhaa otuu jiranuu; kaan ammoo haala sukkaneessaa ta’een ajjeesanii; ija hawaasota addunyaa biratti fannisanii uummata keenyatti agarsiisaa otuu jiranuu,… mootummaa nama-nyaata kana wajjin hojjennee karaa nagaatiin bilisummaa arganna jechuun gowwummaa dha moo otuu waan kana hundaa arganuu hubachuu dhabuu dhaa? Namni akkamitti balaa namtti deemaa jiru alaalatti arguu dadhaba? Hanga nama bira gayee, qabee nama hudhutti callisaniituma ykn ofdagatanii eeguun beekumsa ykn abbaa malaa fi tooftaa ta’uu dhaa?Asirratti gaafiilee lakkaawamanii hin dhumnetu ka’uu danda’u.
gltm Afaan bareedaa kanaan nu barreessuu keef! Garuu waan hin hojjenne irra haasahuu ykn barreessuu tti nuti, Oromoon, baay’ee jaboo dha! Laafinnii keenyi waan hojjetu himuu fi hojiirra oolchuu dhabuu dha! Mee waan hojjetu nu argisiisuu fi barreessutti jabaadhu!
Abdii boruu baay’ee galatoomi. Dhugaa jette. Oromoon hundi kana amanee gara warraaqsaa fi qabsootti fuula deebifnaan bilisummaan oromoo dhihoodha. Dhaabbileen siyaasaa garaagaraa kanneen bilisummaa oromootiif falman hundi galmi isaanii bilisummaa taanaan walitti deebi’anii tokkoomanii humna qabsoo oromoo cimsachuu dha. Kana irraa kan hafe akkaataa itti adeemamuu qabu wallaaluufii walitti dhiheenya dhabiinsa ummataa fi qaama ijaarsa warraaqsaa irraa kan ka’e yoo ta’e malee ummanni oromoo dheebuu bilisummaa kan bara dheeraa irra ture kana bahuudhaaf hawwuu dhabaniitii miti. Kanaafuu warraaqsaaf ka’uudha, qabsoof ka’uudha. Beektotni hundi bilisummaan tolaan akka hin dhufne ummata hubachiisuu fii akkaataa itti deemamuu qabus haala mijjeessuu dha. Ati nuuf jiraadhu… Waan guddaa sirraa eegna. Horii buli…. Galatni kee Bilisummaa ummata oromoo haa ta’u.